Yaasiin Farey oo laga hor istaagay booqashada Mucalimuu | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ay Keydmedia Online, u xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah, ehellada Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimuu iyo ilaalada qaabilsan amnigiisa ayaa hor istaagay eedeysane Yaasiin Farey, kaas oo isbitaalka Digfeer u tagay booqashada Mucalimuu.
Eedeysane Yaasiin Farey oo hadda ku magacaaban xilka agaasimaha KMG ah ee NISA, wuxuu hore u soo ahaa madax ilaalada Fahad Yaasiin, wuxuu soo noqday shaqsiga ugu sarreeyay nabadsugidda gobolka Banaadir xilligii Fahad, wuxuuna qeyb ka yahay shaqsiyaadka tuhunnadu dul-hoganayaan.
Maadaama dadka qaar, gaar ahaan ehelka Maxamed Ibraahim Macalimuu, rumeysan yihiin in Afhayeenka Xukuumadda loo beegsaday sabab siyaasadeed oo la xariirta khilaafka ka dhexeeya Farmaajo iyo Rooble, isla-markaasna Yaasiin Farey ku daaban yahay hoggaanka kooxda la tuhunsan yahay ayaa loo diiday booqashada Macalimuu.
Farey, wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadka ku eedeysan kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo ah gabar ka tirsaneyd NISA, oo tan iyo 26-kii Juun 2021 maqane ah, taas oo Fahad Yaasiin sheegay in ay dileen Al-Shabaab, kuwaas oo dhankooda iska fogeeyay dilka Ikraan.
Dhaawaca Maxamed Ibraahim Macalimuu, ayaa Isniinta berri ah la filayaa in loo qaad dalka dibaddiisa, waxaana caawa Isbitaalka digfeer oo lagu sii baxnaaninayo ku ilaalinaya, ilaalo ka socota xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha.